चार फिल्म रिलिज, कुन हेर्ने ? « रंग खबर
चार फिल्म रिलिज, कुन हेर्ने ?
रंगखबर, काठमाडौँ – नेपाली बक्सअफिसमा आज शुक्रबारबाट चार फ्रेस फिल्मले प्रदर्शनी सुरुवात गरेका छन् । ‘कथा काठमाडौँ’, ‘छिरिङ’ र ‘अनुराग’ नेपाली फिल्म हुन् भने बलिउडबाट ‘सुईधागा’ रिलिज भएको छ । चर्चा गरौँ यी फिल्महरुको बारेमा ।
देशको राजधानी काठमाडौँको पृष्ठभुमिमा निर्माण भएको फिल्मलाई, काठमाडौँका मल्टीप्लेक्सले अन्य नेपाली फिल्मको दाँजोमा राम्रो सोज दिएका छन् । निर्माण पक्षले दावी गरेअनुसार फिल्मले काठमाडौँमा बस्ने बिभिन्न मानिसका फरक-फरक जीवनका कथा बोल्नेछ ।
फिल्ममा समावेश प्रियंका कार्की र प्रमोद अग्रहरीको अन्तरंग दृश्यका कारण निर्माण पक्ष र विशेष गरि प्रियंकाले नकारात्मक कमेन्टको वर्षा थेग्नुपर्यो । ट्रेलर रिलिज भएलगतै प्रियंका फिल्मको पब्लिसिटीमा नदेखिएपछि, कतिले यस्तो फिल्म खेलेकोमा प्रियंकालाई पश्चाताप भएको अड्कलबाजी काटेका थिए । तर, रिलिजको मुखमा प्रियंका उक्त सिनप्रति सकारात्मक देखिएपछि फिल्मले राम्रो हाइप सृजना गरेको छ ।
संगीता श्रेष्ठको लेखन तथा निर्देशन रहेको फिल्ममा प्रियंका र प्रमोदसँगै आयुषमान देशराज जोशी, संजोग कोइराला, संध्या केसी, प्रेक्षा अधिकारीलगायतका कलाकारको अभिनय छ ।
यसकुमार निर्देशित फिल्मले अबिकसित गाउँको बिकास गर्न लागि परेको युवाको कथा बोल्छ । फिल्मको शिर्ष कलाकारमा निमा रुम्बा र यसकुमारको अभिनय छ । यी दुईसँग नवअभिनेत्री कामना भुजेलले स्क्रिन शेयर गरेकी छन् ।
सिंगल लक्षित फिल्मले मल्टीप्लेक्समा केहि सोज पाएको छ । विहिबार सम्पन्न प्रिमियरमा फिल्मले मिश्रीत प्रतिक्रिया पायो । खचाखच रहेको प्रिमियरमा विशेष गरि यसको संगीत पक्ष र मेकिङको तारिफ भयो । कथा, पटकथामा फिल्म कमजोर बनेको अधिकाँसको प्रतिक्रिया थियो ।
पत्रकार ऋषि धमलाले निर्माण गरेको फिल्ममा उनकी पत्नी एलिजा गौतम र समुन्द्र पण्डितले अभिनय गरेका छन् । सत्यराज चौलागाईं निर्देशित म्युजिकल लभस्टोरीले मल्टीप्लेक्समा न्यून स्थान पाएको छ । भने सिंगलमा राम्रो व्यापार गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
फिल्मको नामसँग धमला र उनकी पत्नीको नाम जोडिदा, नामले हाइप पाएपनि फिल्मका सार्वजनिक प्रचार सामाग्रीले खास्सै प्रभाव जमाउन सकिरहेका छैनन् ।
बरुण धवन र अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म सोसियल ड्रामा हो । शरत कतारिया निर्देशित फिल्मको सोज, हाल संख्या र अग्रिम बुकिङ हेर्दा फिल्मले नेपालमा राम्रो व्यापारको संकेत गरेको छ ।
यो साता रिलिज भएका नेपाली फिल्मलाई विशेषत ‘सुईधागा’ले प्रभाव पार्नेछ ।